I-NASA ifuna ukuvavanya ukuba kunokwenzeka na ukukhusela umhlaba kwi-asteroid | Iindaba zeGajethi
I-NASA ifuna ukuvavanya ukuba kunokwenzeka na ukukhusela uMhlaba kwi-asteroid
Nangona kubonakala ngathi zonke iindaba ngokubhekisele kwisithuba esiza kuthi sisuka kwii-arhente ezahlukeneyo kwihlabathi liphela okanye kwimibutho eyahlukeneyo, iinkampani zabucala ... zinxulumene ngokusondeleyo nombono wolo hlolo lwendawo, ikholoni yeeplanethi ezintsha kunye namanye amabali ahambelana nawo, kakhulu Kuninzi kunambitha yabantu, inyani kukuba namhlanje sikwasebenza nakwezinye iinkalo ezininzi ezinje ukufumanisa kwangaphambili iiasteroids.
Nangona isenokubonakala ichasene, inyani yeyokuba zininzi iiasteroids ezithi minyaka le zidlule kufutshane noMhlaba, ezinye zifunyenwe kwangethuba ngelixa ezinye, ngelishwa, zide zingabikho kuthi zingafunyanwa ziiarhente, oososayensi , abavumisi ngeenkwenkwezi ..., ngamafutshane, abantu abaphantse yonke imihla amehlo abo abheke esibhakabhakeni, into enokuthi ibe Umcimbi oxhalabisa kakhulu kwaye ekufuneka sikwazi ukusombulula kuwo ngokukhawuleza.
1 I-NASA ifuna ukuphuhlisa inkqubo yokufumanisa kwangoko kunye nokuthatha amanyathelo phambi kwesoyikiso sokuba i-meteorite ingabetha uMhlaba.
2 Uvavanyo lokuqala lwale nkqubo luya kubanjwa nge-12 ka-Okthobha
3 Uluvo oluphambili lwale nkqubo luzama ukufumana indlela yokuphambuka kwindlela ye-asteroid yamakhulu eemitha ububanzi.
I-NASA ifuna ukuphuhlisa inkqubo yokufumanisa kwangoko kunye nokuthatha amanyathelo phambi kwesoyikiso sokuba i-meteorite ingabetha uMhlaba.
Ngale nto engqondweni, ayothusi into yokuba kubekho iinkokheli ezininzi ze NASA abo bagqibe kwelokuba bahlangane neearhente ezininzi zesithuba ngamandla amakhulu nobukho banamhlanje ukuphumeza isicwangciso esifanayo esibhaptiziweyo ngegama elinomdla Iphulo loKhuseleko lwePlanethi, apho siza kuzama ukufumana eyona ndlela yokuzikhusela ngokuchasene nokubakho kwe-asteroid echaphazela iplanethi yethu kunye nokwenza intlekele enobukhulu obufanayo naleyo yaphela yaphela iidinosaurs.
Enye yeenjongo eziphambili zale nkqubo, ekhuthazwa ngamandla yiNASA namhlanje, kukuseka isicwangciso sokuphendula ngokukhawuleza ukuba ngaba sisoyikiswa ngokuqatha yimeteorite enokuthi iwele umzila womhlaba ngomzuzu othile. Ngalo mzuzu zonke ii-alamu kufuneka zicime kwaye esi sicwangciso sele sikhankanyiwe kufuneka senziwe, nangona, okwangoku, akucaci ukuba leliphi inyathelo eliza kuthathwa.
Uvavanyo lokuqala lwale nkqubo luya kubanjwa nge-12 ka-Okthobha
Phambi kokuba uqhubeke, xelela, njengoko besenzile ngokusesikweni ukusuka kwi-NASA ebusweni benani elikhulu lemibuzo ukuba isibhengezo esifana nesi sivelise eluntwini, ukuba sijamelene neprojekthi echazwe njengolingelo. Ngaphambi koku, zininzi iimvavanyo ekufuneka zenziwe icace gca malunga nendlela emasenze ngayo xa sijamelene nesoyikiso sokwenyani Oko kungabuphelisa ubomi emhlabeni.
Phakathi kovavanyo lokuqala oluza kwenziwa, gqamisa oluza kubakho ngokulandelayo Oktobha 12 °, Umhla apho ukuthunyelwa komkhosi obaluleke kakhulu kuye kwalungiselelwa ukwenza uqeqesho oluya kusibonisa ukuba kuya kwenzeka ntoni xa ujongene nesoyikiso esiyinyani. Ukungena nzulu kulo mbuzo, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba uvavanyo oluza kwenziwa luya kugqitywa kuphela ekuqinisekiseni ukuba ingaba iinkqubo ezenziweyo esele zichaziwe ngeli xesha ziyasebenza, ngakumbi ezo zinxulumene nonxibelelwano phakathi kwendawo eyahlukileyo iiarhente.
Uluvo oluphambili lwale nkqubo luzama ukufumana indlela yokuphambuka kwindlela ye-asteroid yamakhulu eemitha ububanzi.
Enye into eyahlukileyo kukuphumeza inkqubo yokhuseleko kunye nentsimbi, into eya kuthi ibandakanye ukuphelisa i-asteroid esithubeni ngohlaselo lweprojekti, into enokwenzeka ngokuxhomekeke kubungakanani be-asteroid uqobo okanye, ukulandela umendo ophawulwe I-NASA nezinye iiarhente, zama ukujika indlela yalo
Nokuba siyintoni na isicelo, inyani kukuba ngalo mzuzu, kunye netekhnoloji esinayo namhlanje, inyani kukuba kunjalo akunakwenzeka ukuba ukhwele inqanawa Ixhotyiswe ngamandla omlilo ngokwaneleyo ukwenza lo msebenzi, ngakumbi nangakumbi ukuba sicinga ukuba sithetha ngeemeteorite ezinobubanzi obungamakhulu eemitha.
Más información: Isaziso soSayensi
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » I-NASA ifuna ukuvavanya ukuba kunokwenzeka na ukukhusela uMhlaba kwi-asteroid
Usihlalo kaMaria Carmen Almerich sitsho
Iya kuba yimfuneko.
Phendula uMaria Carmen Almerich Silla
Ndicinga ukuba uthetha i-astronomer kwaye hayi "ngeenkwenkwezi", yile nto uyibekayo ...
UNintendo ujongene netyala lokuqala leNintendo Guqula u-Joy-Con